Eeh, E Nwere Nnukwu Blọọgụ Si N'ebe ahụ Iji Chọpụta ... Nke a bụ otu esi achọ Ha | Martech Zone
Ee, E Nwere Nnukwu Blọọgụ Si N’ebe ahụ Iji Chọpụta… Nke a bụ otu esi achọ Ha
Fraịde, Ọktọba 5, 2018 Douglas Karr
Blọọgụ? Ana m ede banyere ịde blọgụ? Ọfọn, ee. Ọ bụ ezie na usoro nche anwụ gọọmentị anyị na-etinye n'ọrụ ugbu a ahịa ahịa, ịde blọgụ na-anọgide na-abụ usoro kachasịsịsịsị nke ụlọ ọrụ na-eji iji nweta echiche ha na ndị ahịa ugbu a. Amaghị m n'ezie na okwu ahụ ịde blọgụ ga-eto eto, mana eji ya ọtụtụ obere karịa mgbe ọ bụla. N'ezie, m na-ezo aka na ederede m ebe a dị ka isiokwu kama blog posts.
Ka m na-emepe saịtị ndị ahịa m, oge ụfọdụ anaghị m etinyekwa okwu blọọgụ na nkọwapụta nchịkọta isiokwu ha. Yabụ, olee mgbe blọọgụ abụghị blog? Amaghị m… mana usoro ide usoro nke ọdịnaya nke na-agbadata n'usoro oge na-aga bụ ihe gbasara ebe ọ bụla ị lere anya n'ịntanetị. Ihe nyiwe nke azụmaahịa na-eji ka bụ blọọgụ na teknụzụ, ma gụnye ndepụta maka syndication. Ọ bụ naanị na verbiage na ewu ewu metụtara ịde blọgụ naanị anaghị eji ya.
Hindsight na-abụkarị 20/20, mana ọ bụrụ na m ma na oge a ga-agabiga ngwa ngwa mgbe m dere Gingde blọgụ maka Dummies. Ọbụna afọ asatọ ka e mesịrị, ọtụtụ n'ime usoro na ndụmọdụ m ji mee akwụkwọ a ka na-arụpụta n'oge a. Offọdụ nyiwe ndị ahụ apụla na igwe nchọta ihe kariri nke ọma, mana o doro anya na ịde blọgụ na-aga n'ihu na-eweta nsonaazụ dị ukwuu maka otu.
Kama iji ndị na-agụ nri, ndị folks na-eji ma na -ekekọrịta isiokwu site na mgbasa ozi mmekọrịta. Ikekwe nke a bụ ihe kpatara ya Nchọta Blog nke Google na-lara ezumike nká… blog posts nwere ike agaghịkwa-iche na ihe ọ bụla ọzọ ọdịnaya online.
N'ezie, Google nwere ugbu a News… Ngwa mkpanaka na injin enwere ike iji nweta ebe esi enweta akụkọ, ọtụtụ n'ime ha bụ blọọgụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ itinye blọgụ gị, ịnwere ike debanye aha dị ka onye mbipụta akụkọ na akụkọ Google. Akụkọ Google nwere ụfọdụ ụzọ pụrụ iche iji kpochapụ ya. Otu ụzọ bụ ịchọ nchọta RSS n'ezie. Yabụ, ọ bụrụ na ịchọọ ọchụchọ (dịka ọmụmaatụ) ma gbakwunye mmepụta = rss, ịnwere ike ị nweta ndapụta site na sistemụ njikwa ọdịnaya ejiri.
A bụ ihe RSS Search iji Google News:
E nwere ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ iji chọpụta blọọgụ dị ukwuu n'ịntanetị, dị ka nkọwa zuru ezu na Ntuziaka Ntanetị Blogger a, Choputa Blog ohuru. Ha na-akọwa ọtụtụ ụzọ, gụnyere:
iji Google Search ajuju ka ichota akwukwo ndi edeturu ha.
Blogchọpụta blọọgụ site na iji a Na-agụ Akwụkwọ.
N'ezie, iji Social Media dị ka Facebook, Twitter, na ọbụna Pinterest
Iji dị Ntuziaka na ntanetị, ọtụtụ n'ime ha ka na-arụsi ọrụ ike ma zie ezi.
Inweta Blogrolls na blọọgụ dị ugbu a. Ndị a bụ ndepụta nke blọọgụ edenyere aha nke blogger na-atụ aro.
Chọọ ọkacha mmasị gị Author, ha oftne nwere blọọgụ.
Jide n'aka na lelee ederede zuru ezu, obu ezigbo ihe enyemaka.
Tags: isiokwuodeeblognyocha blogịde blọgụblogrollcontent Marketingndebanye ahadirectoryndepụta agụozi googlegoogle searchPublishingelekọta mmadụ mediaWriting
Etu esi edekọ ọtụtụ ndị ọbịa mpaghara na mbugharị H6 gị na ndị ọbịa na Garageband